Blazin´ Bullfrog oghere nyochaa na RTP - cheapinternetsecuritysoftware.com
By Mildred Coleman On June 16, 2021 No Comments
Site na Fire Toad Slot, Play’N Go laghachiri na oghere ọkpụkpọ akpọ Blazin´ Bullfrog. Dị ka akara ngosi nke akụ na ụba dabere na ọdịnala Eshia, ọ bụ ụdị frog ka amasị. Bullfrogs nwere ike ọ gaghị abụ anụ ụlọ kachasị mma ị nwere mana Play’N Go nwetara atụmatụ ka mma maka ha na egwuregwu a. N’ime oghere a, ị ga-ezute ebe Golden Bullfrog nke ụlọ ọrụ ahụ, Gems ya na akara ngosi ndị ọzọ.
Reels: 5Rows: 3RTP: 96.2% Min nzọ: £ 0.1Max nzọ: £ 100Paylines: 243Max win: 1,125x per spin
Blazin´ Bullfrog oghere imewe
Maka ndị egwuregwu ahụ nọ na akara ọla na akara deluxe, Blazin´ Bullfrog nwere ike dabara na ụdị ahụ. Egwuregwu a nwekwara ike ịrịọ ndị chọrọ egwuregwu metụtara omenala Asia. Ma ebe ọ bụ na grid ya nwere naanị akara na ahịrị ole na ole, ọ naghị egosipụta ọtụtụ akara. Ọbụna akara ngosi anụ ọhịa ya na akara ngosi gbasasịrị n’otu ụdị nke Golden Bullfrog. Ya mere, enweghi otutu akara icho anya na esi eme.
Ewezuga akara ngosi 2-in-1 Golden Bullfrog Wild na Scatter, akara ngosi ndị ọzọ na akara ngosi gụnyere Golden BARs na Golden 7s. N’ezie, anyị enweghị ike ichefu banyere akara akwụ ụgwọ dị ala nke gụnyere Gems nwere agba dị iche iche. Design-maara ihe, Blazin´ Bullfrog si n’ozuzu imewe anya dị mfe ma mma na mma n’anya. Agbanyeghị, onye nrụpụta ahụ agbakwunyela ihe odide na akara ngosi na-atọ ụtọ iji tinye ntụrụndụ na egwuregwu.
Blazin´ Bullfrog atụmatụ
E jiri ya tụnyere egwuregwu Play’N Go ndị ọzọ, Blazin´ Bullfrog nwere egwuregwu dị mfe karịa agbanyeghị frog na-achọ mma. Mgbe ọ bịara na njirimara ya, Blazin´ Bullfrog anaghị enye ihe dị iche na akara akara anụ ọhịa ya, akara ngosi, na Respins. E debere mpaghara egwuregwu ya na 5 na-acha ọkụ na ahịrị 3 ya mere na ọ nweghị ọtụtụ akara. Ka o sina dị, egwuregwu a na akara ya dị oke ọnụ nwere ike inyere gị aka inweta ezigbo mmeri na ịkwụ ụgwọ.
Blazin Wild Bullfrog’s Wild symbol na-enyere aka ịmebe ụyọkọ mmeri karịa. E gosipụtara ya site na Golden Bullfrog nke na-ejide bọọlụ nwere “W” n’ime. Ma n’adịghị ka akara nnọchi anya, akara ngosi a pụrụ iche nwere ike ịpụta na reels wee dochie akara niile na -adị. Yabụ, ịmepụta ụyọkọ mmeri nwere ike ịdị mfe mgbe ọ bụla akara ngosi Ọhịa dị n’akụkụ akara ndị ọzọ dabara adaba.
A na-egosiputa akara ngosi nke Blazin by Bullfrog site na akara ngosi Golden Bullfrog nke na-enye akara ngosi anụ ọhịa nzube abụọ. Ihe ngosi achụsasị nwere ike ịdakwasị na agba abụọ nke abụọ, nke atọ na nke anọ iji kpalite akụkụ ọzọ nke egwuregwu ahụ.
Ọ bụrụ na ịdada akara akara Golden Bullfrog Scatter na 2nd, 3rd, ma ọ bụ nke anọ, a ga-ebute Blazin´ Respin. Ihe ngbasa niile nke gbasasịrị atụmatụ a ga-agbanwe ka ọ bụrụ akara akara anụ ọhịa nke nwere ike ikpuchi agba niile. Njirimara a na-abawanye na-emetụta ọdịiche dị n’akụkụ ebe akara ngosi Golden Bullfrog dị.
Ozugbo akara Wilds na-agbasawanye kpuchie akụkụ ha, ị ga-enweta 1 Respin na akara ndị ahụ. Otutu akara ohia ma obu akara akara nwere ike ịdata n’otu oge ya mere ọ ga-ekwe omume inwetawanyewanye Wilds. Yabụ, ọnụọgụ ndị ọzọ nwere ike ịnweta Respin Bonus. N’otu oge, ohere gị ị mepụta ụyọkọ mmeri na-akwụ ụgwọ dị elu dị elu karịa na atụmatụ a na-arụ ọrụ.
Blazin´ Bullfrog RTP, ịkụ nzọ na onyinye
You nwere ike ịnụ ụtọ Blazin´ Bullfrog na atụmatụ ya iji merie n’ụzọ 243. Nwere ike nzọ n’etiti opekempe nke 10 0.10 na nke kachasị nke £ 100 na ntụgharị ọ bụla. Iji kpatụ nzọ gị, kpatụ bọtịnụ + na – bọtịnụ ala nke esi anwụde. Imeri n’egwuregwu a aputaghi na akara akara na-aghaghi iru di n’akuku ibe gi. Ihe nnọchianya kwekọrọ nwere ike ịdakwasị ebe ọ bụla na ntanetị ma ọ bụrụhaala na ịkwụ ụgwọ kpuchie ha.
Dịka ọmụmaatụ, akara ngosi dabara na 1st, 2nd na 3rd reels nwere ike ịbụ ngwakọta mmeri. Agbanyeghị, a gaghị agụ akara ndị kwekọrịtara na nke ritere na 1st, 2nd, 4, na 5. Blazin´ Bullfrog nwere 96.20% RTP nke dị mma iji nye gị ezigbo ugwo. N’ihe dị ka 1 ruo 10, ụda ya dị na 5 ya mere, ihe ize ndụ ahụ abụghị nke dị elu nke na-eme ka ọ bụrụ egwuregwu dị iche iche.
Ma na ụfọdụ casinos, RTP nke Blazin´ Bullfrog nwere ike ịdị ala dabere na nhazi ndị ọrụ. Ọtụtụ egwuregwu si Play’N Go na-agbanwe nke ukwuu ka onye mbido ma ọ bụ ndị na-amu amu nwere ike iji egwuregwu a mee ihe. Ọ nwere egwuregwu dị mfe dị mfe yana nkwụnye mmeri kachasị elu ị nwere ike ịnweta ruru 1,215x osisi gị.
Ya Golden-BARs na Lucky 7s bara uru 1.5x ka 3x gị osisi ma ọ bụrụ na ị kụrụ 5 kenha akara. Ka ọ dị ugbu a, akụ ya na-akwụ ụgwọ dị obere nke nwere agba dị iche iche nke oroma, ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na odo odo bara uru 0.4x ka 1x osisi gị. Dị ka akara ngosi adịchaghị, ịchọrọkwa 5 nke akara ngosi ndị a iji mepụta ụyọkọ mmeri.
Ebee igwu egwu Blazin´ Bullfrog
Ọ bụrụ n’ịchọrọ igwu egwu Blazin´ Bullfrog, ndị a bụ ụlọ ịgba egwu Play´n GO kachasị elu na UK:
UK cha cha n’ịntanetị Bonus info Nleta cha chaMr. Kpọọ
Nanị: 200% £ 300 + 100 Extra Spins na Starburst
Gaa Leta weebụsaịtị Gụọ ReviewCasino Lab
100% £ 100 + 300x
Gaa Leta weebụsaịtị Gụọ ReviewGods
100% 100 £ 100 + 300 ọzọ
Gaa Leta weebụsaịtị Gụọ ReviewUnibet
Deposit £ 10 – nweta £ 40
Gaa Leta weebụsaịtị Gụọ ReviewCasiplay
100% £ 100 + 150x
Gaa Leta weebụsaịtị Gụọ Review
Blazin´ Bullfrog kwubiri
Blazin´ Bullfrog Slot bụ egwuregwu dị mfe na ụyọkọ nke ọla dị oke ọnụ ahịa na n’ezie Golden Bullfrog. Aha ya na imewe ya abụghị ihe na-adọrọ mmasị ma e jiri ya tụnyere nchịkọta egwuregwu Play’N Go. Ọbụna egwuregwu ya dị nnọọ mfe ebe ọ na-enweghị ọtụtụ atụmatụ iji mee ka egwuregwu ahụ na-atọ ụtọ. Ọzọkwa, RTP ya nwere ike ịdị iche na-adabere na cha cha mana RTP ndabara ya ka atọrọ na 96.20%.
Ka o sina dị, njirimara ya dị mfe mere ka ọ dị mfe ịnyagharịa na igwu egwu nke zuru oke maka ndị mbido. Ọbụna ọkwa ya dị oke mma maka ndị na-ahọrọ egwuregwu egwuregwu na-adịghị ize ndụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ụgwọ kachasị ya na ntụgharị abụghị nnukwu ma ọ nwere nnukwu Return to Player percent. Mana ọ bụrụ na Blazin´ Bullfrog nwere ikike imeri ka elu, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-amasị ndị egwuregwu dịgasị iche.
Kedu ihe bụ RTP na oghere Blazin´ Bullfrog?
Oghere Blazin´ Bullfrog nwere 96.2%, RTP, aka Return to Player.
Gịnị bụ volatility na Blazin´ Bullfrog?
Mwakpo Megaways bụ oghere volatility ọkara.
Kedu ndị na-eweta egwuregwu wepụtara Blazin´ Bullfrog?
Blazin´ Bullfrog sitere na Play´n GO, otu n’ime ndị na-egwu egwuregwu a na-akwanyere ùgwù na ụlọ ọrụ ahụ.
Tags:Blazin Bullfrog nyochaa oghere RTP
Isiokwu a nwere obere oge inye. Gwuo egwu. 18+. Kasị …